#BeEnriched #BeInspired #BeDriven လူငယ္မ်ား ေလ့လာႏိုင္ရန္ႏွင့္ စိတ္အားတက္ေစရန္ Wynee မွ ပထမဦးဆံုး အႀကိမ္ျ...
What Career CanaLanguage Degree Give You?
ဘာသာစကား တစ္ခုနဲ႔ ဘြဲ႕ရတဲ့ အခါ ဘယ္လိုအသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္း လုပ္ငန္းေတြ လုပ္ကိုင္ႏုိင္မလဲ။ “ လူတစ္ေယာက္ကို သူနားလည္တဲ့ဘာသာစကားနဲ႔ ေျပာရင္ အဲ့စကားက သူ႔မွတ္ဥာဏ္ထဲကို ေရာက္သြားပါလိမ့္မယ္။ ဒါေပမယ့္ လူတစ္ေယာက္ကို သူေျပာတဲ့ ဘာသာစကားသံုးၿပီး ေ...
How To Take Part in Meetings?
အစည်းအဝေးပွဲတွေကို ဘယ်လို ပါဝင်မလဲ။ သာမန်အားဖြင့် တော့ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းတစ်ခုကို အစပြုလုပ်ကိုင်တဲ့အချိန်မှာဆို ရုံးအစည်းအဝေးပွဲတွေဟာ ခြောက်ခြားစရာတွေ ဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။ အလုပ်ခွင်တိုင်းမှာတော့ ရာထူး အထက်ကနေ၊ အောက်အထိ အသီးသီး စံချိန်စံနှုန်းသ...
[Zawgyi] လူငယ်တွေအတွက် အလုပ်အကိုင်လှုပ်ရှားမှုအခွင့်အရေးတွေကို ဦးစားပေးကျင်းပတဲ့ ပထမဦးဆုံး Human library(လူသားစာကြည့်တိုက်)ကို သြဂုတ်လ ၁၉ ရက်နေ့မှာ Hintha Business Centres မှာ ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ ဒီပွဲမှာတော့ လူငယ်တွေဟာ စီးပွားရေးနယ်ပ...
I want to enteradesign (interior / landscape) space. I do not have time and money to enrol inaschool. What should I do?
အိမ်အတွင်းပိုင်း အလှဆင်မှုကို စိတ်ဝင်စားတယ်။ ဒါပေမဲံ အဲ့ပညာနှင့် သက်ဆိုင်တဲ့ ကျောင်းတက်ဖို့ အချိန်နှင့် ပိုက်ဆံ မရှိဘူး။ ဘာဆက်လုပ်သင့်လဲ။ ဒီဇိုင်းပညာနှင့် ပတ်သင်သော အလုပ်အကိုင်တွေဟာ အလွန် အလားအလာကောင်းတယ်လို့ လူသိများတဲ့ အလုပ်အကိုင်တစ်ခုဖြ...
အလုပ်ခန့်ဖို့ အလားလာရှိတဲ့ အလုပ်ရှင်နဲ့ တွေ့ရင် two-minute pitch ဘယ်လိုပြောရမလဲ။
How should I make use of my time in university to secureafull-time job, even before I graduate?
ဘွဲ့မရခင်ထဲက အလုပ်ရဖို့ သေချာအောင် ကျောင်းတက်နေကတည်းက အချိန်ကို ကောင်းကောင်းဘယ်လိုအသုံးချရမလဲ။ ယနေ့ခေတ်မှာဆိုရင် ကျောင်းပြီးပြီးချင်း အလုပ်တန်းရဖို့အတွက် ဘွဲ့ရရုံတစ်ခုတည်းနဲ့ မလုံလောက်တော့ပါဘူး။ အလုပ်ရဖို့အတွက် အရမ်းတော်တဲ့ အခြားသော အလုပ်လ...